OneSignal: Desktop, App သို့မဟုတ် Email မှ Push Notifications များကိုထည့်ပါ Martech Zone
OneSignal: Desktop, App သို့မဟုတ် Email ဖြင့် Push Notifications များကိုထည့်ပါ
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2018 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2018 Douglas Karr
လစဉ်ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ browser push notifications ကနေတစ်သောင်းပြန်လာတဲ့ visitors ည့်သည်တွေရတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ငါတို့ရွေးထားတဲ့ပလက်ဖောင်းကပိတ်ပစ်လိုက်ပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါအသစ်တစ်ခုရှာရတယ်။ ပိုဆိုးတာကအဲဒီစာရင်းပေးသွင်းသူအဟောင်းတွေကိုငါတို့ site ထဲကိုပြန်ပို့လို့မရဘူး။ ဒါဆိုငါတို့ hit လုပ်တော့မယ်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်, ငါလူသိများပြီးအရွယ်မှာ၏ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် OneSignal.
မသာမ OneSignal ဘရောင်ဇာများအတွက်သတိပေးချက်များတွန်းအားပေးပါ၊ သူတို့သည်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့် push သတိပေးချက်များအတွက်တစ်နေရာတည်း၌သာဆိုင်သည်။
Push Notification ဆိုတာဘာလဲ။
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်များစွာအသုံးချနိုင်သည် ဆွဲပါ နည်းပညာများသည်အသုံးပြုသူသည်တောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်ပြီးစနစ်သည်တောင်းဆိုထားသောသတင်းစကားကိုတုံ့ပြန်သည်။ ဥပမာတစ်ခုသည်အသုံးပြုသူသည် download ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုသည့် landing page တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကပုံစံကိုတင်ပြသည်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လင့်ခ်တစ်ခုပါသောအီးမေးလ်တစ်ခုပို့သည်။ ၎င်းသည်အသုံး ၀ င်သော်လည်းအလားအလာရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်သည်။ Push အကြောင်းကြားစာများသည်ခွင့်ပြုချက်အခြေခံသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားသည်တောင်းဆိုမှုကိုစတင်ရန်ရရှိသည်။
ဤတွင် push အကြောင်းကြားစာများဥပမာအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြထားသည်။
Desktop Push အကြောင်းကြားစာများ - မျက်မှောက်ခေတ် browser (ဘရောက်ဆာ) များသည်အခွင့်အလမ်းပေးသည် တွန်းထိုး အသိပေးချက်။ ဥပမာဒီ site ပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် visit ည့်သည်ကိုသူတို့ကအကြောင်းကြားစာတစ်ခုပို့ပေးနိုင်မလားဟုမေးသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကအတည်ပြုမယ်ဆိုရင် post အသစ်တစ်ခုကိုငါတို့ထုတ်တဲ့အခါတိုင်းသူတို့ desktop desktop ကိုလက်ခံရရှိမှာပါ။
မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း Push အကြောင်းကြားစာများ - မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများသည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအား push notification မှတစ်ဆင့်အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ ငါတကယ်သုံးရတာပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုက Waze အားအကြောင်းကတော့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြက္ခဒိန်ကိုဖတ်ပြီးအသွားအလာပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းကြားစာကိုကျွန်ုပ်လာမည့်အစည်းအဝေးသို့အချိန်မီရောက်ရန်ထွက်ခွာရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစပျိုးအီးမေးလ် Push ကိုအကြောင်းကြားစာများ - အကယ်၍ သင်သည် Apple မှမှာယူပါကသင်သည်သင်၏အမှာစာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ထုပ်ပိုးပြီး၎င်းနှင့် ဦး တည်ရာလမ်းကြောင်းသို့ရောက်သောအခါသင့်အားအသိပေးသည့်အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုတွန်းပို့သည်။
၁၅ မိနစ် Setup - ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်သည်စတင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုမယုံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီခြေရာခံခြင်း - သင်၏သတိပေးချက်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းလဲခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
အရွယ်မှာ - အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာ? ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်အများစုနှင့်အဓိက SDK များအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။
A / B ကိုစမ်းသပ်ခြင်းသတင်းစကား - စမ်းသပ်မှုမက်ဆေ့ခ်ျ (၂) ခုကိုသုံးစွဲသူများ၏အုပ်စုခွဲသို့ပို့ပါ၊ ထို့နောက်ပိုကောင်းသည့်စာကိုကျန်ထံသို့ပို့ပါ။
အပိုင်းပစ်မှတ် - ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောအသိပေးချက်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုဖန်တီးပါ။ ၎င်းကိုသုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအကောင်းဆုံးအချိန်တွင်ပေးအပ်ပါ။
အလိုအလျောက်ပေးပို့ခြင်း - အဲဒါကိုသတ်မှတ်ပြီးမေ့လိုက်ပါ အသုံးပြုသူများထံသို့သက်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များကိုအလိုအလျောက်ပို့ပေးပါ။
အားကောင်းတဲ့ API အပြင် WordPress ကို pluginနှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်ရန်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပစ္စည်းများ (SDKs), OneSignal သည်စျေးကွက်သမားများအတွက်မိမိတို့၏ push notifications များကိုလည်းကောင်းမွန်သော user interface တစ်ခုပေးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် SquareSpace, Joomla, Blogger, Drupal, Weebly, Wix, Magento နှင့် Shopify တို့နှင့်အတူ box ၏ပေါင်းစည်းမှုများကိုလည်းပေးသည်။
Tags: ab စမ်းသပ်မှုသတိပေးချက်ဘလော့ဂါbrowser အကြောင်းကြားစာCross- ပလက်ဖောင်းတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာdesktop အကြောင်းကြားစာDrupaljoomlamagentoမိုဘိုင်း app အသိပေးချက်အသိပေးချက်စင်တာonesignalapi ကိုတွန်းပါအကြောင်းကြားစာတွန်းpush သတိပေးချက် apipush အကြောင်းကြားစာ plugin ကိုအချိန်မှန်တွန်းအားပေးခြေရာခံခြင်းSafari အကြောင်းကြားစာအရွယ်မှာတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာsegment push သတိပေးချက်များshopifySquarespaceအစပျိုးအီးမေးလ်ဝဘ်အကြောင်းကြားစာမင်္ဂလာပါwixwordpress plugin ကို
People.ai: သင်၏အရောင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဖောက်သည်အောင်မြင်သူအဖွဲ့များအတွက်အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကိုသော့ဖွင့်ပါ